E Liela Ozu Oriakụ Josephine Nwachukwu n'Ụkpọr
Next Article Ọkụ Ọkịja: Nwanyị Dị Ime na Ụmụaka Abụọ Anwụọla n'Anambra
Dịka a sị na ụwa bụ ahịa, onye zụchaa nke ya ọ laba, ọ bụ nnọọ oge ntụgharị uche na oge iti aka n'obi, dịka e lìrì ozu oriakụ Josephine Nnenna Nwachukwu, bụ nne onyeisi ọchịchị obodo Ụkpọr.
Mmemme akwamozu ahụ, nke e mere màlite n'abalị iri abụọ na asatọ wee ruo n'abalị iri atọ na otù nke ọnwa Maachị ahọ a bụ nke weere ọnọdụ n'ezinụlọ be di ya dị n'Umuhu Ụkpọr, bụ isi obodo okpuru ọchịchị Nnewi South nke steeti Anambra.
N'ozi nkasiobi o ziteere ezinaụlọ ndị be Nwachukwu, Bishọọpụ ụka Katọliiki na Dayọsiisi Nnewi, bụ Most Rev. Hilary Odili Okeke tòrò Mama Josephine, bụ onye o kwùrù na ezi ọrụ ya n'obodo, ọrụ obi ebere ya inyeịtara ụmụ mmadụ na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka, tinyere ezi ntụnye ya na nsònyesi ike ya n'ụlọ ụka na n'ihe Chineke nà-agba nnọọ ezi àmà na akaebe na ọ ghọtara ihe ọsọ eluigwe pụtara nakwa ụgwọ ọrụ so ya; o wee gbaa nkè ya n'ụzọ a tụrụ anya
Bishọọpụ Okeke, onye kwara àrịrị na ya apụghị ibịanwu ya bụ akwamozu n'onwe ya ụbọchị ahụ n'ihi ihe ndapụta, kasìzịrị ezinaụlọ ndị be Nwachukwu obì, chètara ha na nne ha bìrì ezi ndụ, ma kpọkukwazie ha ka ha sògide ezi nzọ ụkwụ ya ma jìgidesie ezi ọrụ ya ike, ya na ihe ndị o mepùtasịrị n'ụwa.
Na mbụ n'okwuchukwu ya na mmèmme ụka akwamozu ahụ, bụ nke weere ọnọdụ n'ụlọ ụka 'St. Mary's Catholic Church, Ukpor Center', onye nọchitere anya bishọọpụ ma bụrụkwa ode akwụkwọ ya, bụ Rev. Fr. Celestine Okonkwo kpọpụtara úrù atọ na ihe atọ o jiri dị mkpa na a ga-akàrà onye nwụrụ anwụ ụkà akwamozu, nke gụnyere: iji nye Chineke nna òtùto maka ndụ onye ahụ nwụrụ anwụ, iji rịọ Ya o nye onye ahụ nwụrụ anwụ ezumike na ọñụ ebighị ebi n'alaeze Ya, na iji rịọ ya ka ọ kasìé ndị ahụ mmadụ nwụnahịrị obi ma nye ha mmụọ ha ga-eji dìé nkè ahụ. Ọ kpọkùzịrị ma dụọ onye ọbụla dị ndụ ka o were ugbua ọ dị ndụ kwadobere onwe ya ebe ọ ga-aga na ebe ọ ga-anọ ọnọdụ ya n'oge ikpeazụ, n'ihi na ọ dịghị onye maara oge ekwe ga-akpọ ya.
Mgbe ọ na-akọwa nne ya dịka agụ nwaanyị pụrụ ichè, nwa mbụ nkè oriakụ Nwachukwu ma bụrụkwa onyeisi ọchịchị obodo Ụkpọr, bụ Maazị Emmanuel Nwachukwu leghàchirì nnọọ anya azụ, wee kọọ ma kpọpụtasịa ụzọ dị iche iche nne ha siri gosi na ya bụ nwaanyị dị ike ọrụ na nwaanyị nwere ùgwù na nsọpụrụ, malite na tupuu, mgbe na oge a lụchàrà agha Nigeria na Biafra; ya na tupuu na mgbè di ya bụ maazị Joseph Nwachukwu nwụchara n'ahọ 1999. Ọ kpọpụtara ụfọdụ ihe dị iche iche ya bụ agụ nwaanyị mepùtara tupuu ọ laba mmụọ, kwe nkwà n'aha ezinaụlọ ahụ na ya ga-ejigidesi ihe ndị ahụ na nzọ ụkwụ ya ike, ma kpekwazie ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa ma nye ya ezumike udo, ọbụnadị dịka o tòrò ndị dị iche iche bịara isònyere na ịnọnyèrè ha n'oge akwamozu ahụ, ma kpee ka Chineke kwụghàchi ha.
N'okwu nkè ha n'otu n'otu, nwa nwoke nke abụọ nke Ma Josephine, bụ Ụkọchukwu Ifeanyị Nwachukwu, na nwa ya nwoke nke ikpèazụ, bụ Maazị Sunday Nwachukwu, tinyere ụmụ ya ndị nwaanyị, bụ oriakụ Flommy Ekwuy Obiekwe na oriakụ Ogochukwu Nwosu kpọpụtasịrị ụfọdụ akparamagwa dị iche iche e jiri mara nne ha, nke gụnyere na ọ bụ o jide o nye, nwaanyị dị ike ọrụ, ọchọ udo, nwaanyị kwesiri ntụkwasi obi, nwaanyị obi sara sara, nwaanyị obi ọma, nwaanyị na-adịghị akwàdo ihe ọjọọ, nwaanyị na-atụ egwu Chineke, nwaanyị na-egwùte egwu na nwaanyị dị ike n'ekpere. Ha kwuputazịkwara na ọ na-ewute ha na ha agaghị ahụzịkwa ya anya n'ụwa ọzọ, ma kwe ya nkwà na ha agaghị echefù ma ọ bụ hapụ ihe niile ha mụtara n'aka ya, ma ọ bụ gbakụta ha àzụ.
Ndị oriakụ ụmụ Mama Josephine, nke gụnyere oriakụ Paulyn Nwachukwu, oriakụ Ify Nwachukwu na oriakụ Ijeoma Nwachukwu, tínyéré ụmụ-ụmụ ya, nke gụnyere nwaada Ebere Nwachukwu na maazị Nọnso Nwachukwu gbàkwàrà ezi àmà bànyere ezi ọrụ na ezi ndụ nke mama bìrì n'ụwa, ma kwuo na ha ga-esòsi ụkpụrụ ahụ ọ tọbara ha ike, iji wee biekwa ndụ zuru òkè dịka ya onwe ya bìrì.
Mmemme ahụ bụ nke dọtara ọtụtụ ndị dị iche iche selitere isi na ndị e ji okwu ha agba ìzù na ngalaba dị iche iche na steeti ahụ na mpụga ya, nke gụnyere: aka chịbụrụ steeti Delta n'oge gara aga, bụ maazị James Ibori; nwa amadi ahụ a họpụtara ọhụ ịnọchite anya ọgbọ nta nkwàdo 'Anambra South' n'ụlọ ọgbakọ sineeti ala anyị, bụ Dọkịta Ifeanyị Ụbah; ògbò ya nke ọgbọ nta nkwàdo Anambra Etiti, bụ sinetọ Uche Ekwunife; ọka okwu ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti Anambra, bụ oriakụ Rita Madụagwụ; onyeisi ụlọ ọrụ 'APAMS Ltd', bụ maazị Kelvin Chukwumaobi, tinyere imirikiti ndị ọzọ selitere isi.